Emails asiri kupfuura? Wedzera rekodi yeSSPF! | Martech Zone
Emails asiri kupfuura? Wedzera rekodi yeSSPF!
Wednesday, April 30, 2008 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Ini ndangotamisa email yekambani yangu kuenda ku Google Zvishandiso. Parizvino, isu tinonyatsoda rusununguko rwuri kutipa. Tisati tave paGoogle, taimbofanirwa kuisa zvikumbiro mukati mekuchinja chero kupi, zvinyorwa zvinowedzerwa, nezvimwe. Iye zvino tava kukwanisa kuzvibata zvese kuburikidza neGoogle yakapusa interface.
Imwe mhinganidzo isu takaona, hazvo, yaive yekuti imwe email kubva yedu system haisi kunyatso kuigadzira us. Ndakaita kuverenga pamusoro pezano reGoogle re Vazhinji Email Vatumira ndokukurumidza kushanda. Tine email inobuda pamaapplication maviri atinogashira, chimwe chikumbiro icho mumwe munhu anomisikidza kuwedzera kune Mupi webasa Reemail.
Pfungwa yangu chete ndeyekuti Google irikuvharira imwe email nekuti haigone kumisikidza mutumwa kuburikidza ne SPF rekodhi. Muchidimbu, SPF inzira yaunonyora yako ese maseru, IP kero, nezvimwewo zvauri kutumira email kunze kwemukati rekodhi rekodhi. Izvi zvinobvumira chero ISP ku tarisa rekodhi yako uye usimbise kuti iyo email iri kuuya kubva kunzvimbo yakakodzera.
Iyo ipfungwa yakanaka - uye ini handina chokwadi nei isiri nzira yakakosha yemaviri maemail uye spam anovharira masisitimu. Iwe ungafunge kuti wega domain registrar angaite iyo poindi yekuvaka wizard mukati mayo kuti chero munhu anyoronge kunze kwenyaya dzeemail yavanenge vachitumira. Wese munhu anofanira kunge achishandisa uye achiongorora neSPF! Heinoi zvakadzama chinyorwa nezve SPF uye zvakanakira, chimwe chazvo chiri kugona kuchengetedza dura rako kubva pakuiswa mazita nema spammers vachizviti kuva iwe.
ZANO: Unogona chengetedza yako SPF rekodhi pa250ok.
Kuti unyore yako SPF rekodhi, iwe unofanirwa kuenda chete kusvika iyo iyo SPF Wizard, chishandiso chepamhepo chekukubatsira iwe kunyora rekodhi yako. Ipapo iwe unongoteedzera uye unama mune yako Domain Kunyoresa. Tiri kugadzirisa zvinyorwa zvedu pandinonyora ichi chinyorwa!
Inotevera pane yangu runyorwa iri kutsvaga Domain Keys. Isu takatora nhanho hombe kumberi pataive whitelisted neAOL gore rapera. Ndine kunzwa kuti hondo haizombomira! Zvakaipa ndezvechokwadi makambani ane mukurumbira anofanirwa kusvetuka kuburikidza neese maSOPAM hoops zvakadaro!
Tags: 250okkuburitswaInboxtsvinasender mutemo mamirirospamspam firitaspfspf rekodhi
Kubvumirana hakuzoite Kuti Ubudirire
Apr 30, 2008 pa 10: 03 PM
Dambudziko neSPF uye Sender ID nderekuti inotyora kutumira email. DomainKeys (uye chiyero chave kunzi DKIM) ndiwo masaisai eramangwana, sekureva kunoita vanhu vazhinji; zvisinei, zvakanyanya kuoma kuisa uye kusimbisa.